[RASMI] Mac iPhone Data Recovery: Recovery tirtiray iPhone Data on Mac
dr.fone xidhmo - Mac iPhone Data Recovery
1-dii Mac iPhone iyo iPad software kabashada xogta Adduunka ee.
Kabsadaan xogta iPhone on Mac leh saddex siyaabood.
Awoodaan inay ka bogsadaan xiriirada, SMS, qoraalada, abuse call, photos, video, iwm
Jaanqaadaan iPhone ugu dambeeyay iyo Mac OS.
Isku day Waxaa Free Isku day Waxaa Free App Download
xidhmo dr.fone - soo kabashada xogta iPhone (Mac) waa aalad awood iyo waxtar u leh dadka isticmaala Mac in ay dib u soo ceshano xogta iPhone lumay.
Qalad ah la tirtiro wax muhiim ah on your iPhone? Lumay ama aad iPhone qarxay? Looma baahna in la argagixin! xidhmo dr.fone (Mac), aad Mac iPhone khabiir kabashada xogta, halkan waa inay kaa caawiyaan inaad ka soo kabsado xogta qiimo leh oo aad u malayseen ahaa weligiis badiyay.
Waayo, Xaaladaha kala duwan
Tani Mac iPhone software kabashada xogta shaqeeya xaalado badan oo caan ah.
Xogta laga badiyay ka dib markii warshad soo celiyo
Device qufulan ama halmaameen password
All Features ku saabsan
Waxaad isticmaali kartaa this kabashada xogta Mac iPhone in laga baarayo dhammaan xogta la tirtiro ama lumay on your iPhone, iPad ama iPod taabashada, oo ku eegaan faahfaahsan for free.
Ma doonaysaa in la soo dejisan iyo soo saaro faylka gurmad iCloud? iPhone Tani software kabashada xogta Mac kuu ogolaanaysaa inaad u samayn for free. Isku day oo aad ku ogaan doonaa.
Waxaynu wada ognahay in Apple ma ogola in dadka wax loo akhriyo content ee faylka gurmad iTunes, halka this Mac iPhone software kabashada xogta sameeya, waana lacag la'aan.
Waa in ka badan Mac iPhone qalab kabashada xogta a. Marka aad hesho xogta aad ee natiijada scan, waxaad si toos ah ku eegaan kartaa oo aad daabacan content marka aad u baahan tahay sida a. Waa shaqo hal click ah.
iPhone Tani software kabashada xogta Mac awood aad ka bogsato xogta sida xiriirada, fariimaha, sawiro, qoraalo, wac taariikhda, xusuusinta, fariimo WhatsApp, iyo in ka badan, ilaa 18 nooc file.
No arrinta tahay inaad la isticmaalayo iPhone ugu dambeeyay 7, iPad Pro, ama iPhone hore 4, iPad 1, this kabashada xogta Mac iPhone si buuxda u socon kara oo dhan lagu daydo ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
iPhone Tani software kabashada xogta Mac gebi ahaanba la akhriyo keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
3 Methods Mac iPhone Data Recovery
Si toos ah baarista iPhone la this Mac iPhone software kabashada xogta inay ku eegaan iyo soo kabsadaan xogta tirtiray eegista.
soo saaro iTunes
Exract in ay ku eegaan iyo eegista soo kabsadaan wixii aad rabto in aad ka iTunes aad files raad raac on Mac.
Download iyo soo saaro aad file gurmad iCloud in ay ku eegaan iyo eegista soo kaban wax kasta oo aad rabto in aad ka.
More leh this Software Mac iPhone Data Recovery
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Available: Ka hor inta dib u soo kabashada, waxaad ku eegaan kartaa sawirro, video, fariimaha, xiriirada, qoraal, iwm
Recovery debecsan: kabashada oo dhan ama qaar ka mid ah waxyaabaha la heli karo. Waxaad ku go'aansan.
Data Back to Device: Si toos ah badbaadin xogta soo kabsaday on your iPhone oo aan overwriting xogta jirta.
100% Guarantee Safe: A Mac iPhone qalab akhrin keliya kabashada xogta, ma hayn doonaa ama wax on your iPhone beddelo.
Waa sahal in la Isticmaal: No xirfadaha kombiyuutarka weydiiyay, qof walba isticmaali kartaa this iPhone software kabashada xogta Mac.
Buuxi iPhone Dhignaashada
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10.11 (El Captain), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, ama 10.6
Sidee inuu ka soo kabsado History Call on iPhone (iPhone 6s Plus / 6s Mid)
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka iPhone (6s iPhone Plus Mid)
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
Sida loo soo ceshano fariimaha WhatsApp on iPhone 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro iPhone Nala Xiriir
Sidee inuu ka soo kabsado iMessages ka iPhone (6s iPhone Plus Mid)